Digsiga karinta oo leh dhaymo aan dhagax lahayn
Guriga Qalabka guriga
Digsiga qaboojiyaha waa qayb muhiim u ah jikada. Halkaas waxaad ku dubi kartaa canjeelada, cutlets , shiilaad, kalluun, u dushooda borscht, iwm. Hase yeeshe, haddii horay loo soo iibsaday mishiinkan ma jirin wax dhibaato ah, maantana xulashada moodooyinka waa mid aad u weyn in ay ku adagtahay iibsadayaasha in ay is-hagaajiyaan inta badan dukaanka qaboojiyaha ee miiska dukaanka.
Daqiiqada kudheerka leh dhejis aan ku dhegsanayn, oo horay u ahaan jirtay hoggaamiyeyaasha iibka, maahan hadda caan maanta. Aynu ogaanno sababta, oo raadi sida loo doorto digsi fiican, tayo wanaagsan oo leh dharka aan dusha lahayn.
Kaadi jarjartey adigoo ku dhegeysanaya maqaar aan duubneyn - fara badan iyo xayawaan
Faa'iidada ugu weyn ee duullimaadyada noocan ah waa suurtogalnimada in lagu kariyo suxuunta iyada oo aan halis ugu jirin in ay cuntadu hoos u dhigto. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira makiinado "aan aheyn" iyo cillad culus:
haddii la daboolo Teflon, ka dibna xoqan yar ayaa noqonaya sababta beddelidda suxuunta, sababtoo ah inta lagu jiro cunto karinta taasi waxay keentaa in la sii daayo walxaha sunta ah ee Teflon;
Nooc kale oo aan lagu xirxireynin - dhoobada - inkastoo ay tahay jawi bey'adeed, laakiin waxay ka cabsantahay heerkulka kuleylka iyo dayrta lakabka qaboojiyaha, kaas oo ah dhoobada dhoobada;
nolol maalmeedka adeegga ee digsiga aan lakulmeen, sida caadiga ah, kama badna 5-6 sano;
dusha laftiisa ayaa u baahan in si taxadar leh loo xakameeyo: markaad wax karineyso, ma isticmaali kartid foosto iyo mindiyo, laakiin kaliya silicone / alwaax alwaax ah. Daryeelka taxadirka ah ee digsiga qaboojiyaha waxaa ku jira kaliya lagu maydho lafaha jilicsan, iyada oo aan la isticmaalin walxaha qarxa.
Sida aad arki karto, labadaba noocyada noocyada aan duubneyn ee loogu talagalay godadka qaboojiyaha ayaa leh dhinacyo fiican iyo kuwo xun, laakiin kan ugu fiican waa mid kasta oo marti-geliyuhu go'aaminayo naftiisa.
Tilmaamaha gaarka ah ee xalka qaboojiyaha leh dusha sare ee aan dusha lahayn
Marka aad iibsanayso digsi qaboojiye, had iyo jeer fiiro gaar ah u samee biraha laga sameeyay. Qaboojiyaha oo la kariyo oo aan la xirin ayaa la samayn karaa:
Aluminiim: ku habboon isticmaalka kariyaha gaaska. Waa mid macquul ah in dhumucda derbiyada godka qaboojiyadu ay yihiin 5 mm ama wax ka badan, haddii kale aluminium kale oo khafiif ah ayaa si deg deg ah u gudubaya, taasoo keenta jajab karka aan dhagax lahayn;
laga bilaabo birta birta ah: kariimadu si siman ayaa loo diiriyaa iyo marka laga reebo ilaalinta alaabooyinka oo dhan dhamaan sifooyinka wanaagsan, iyo Teflon ama ceramics ilaaliya birta doofaarka ka soo jiidan;
Dhuxul aan dahsoonayn: doorasho caalami ah oo loo isticmaali karo on induction, gaas ama foornada korantada.
Sidaa daraadeed, waxa shaashadda leh dharka aan dusha sare lahayn ayaa si fiican u muujin doona jikadaada, adiga ayay kugu xiran tahay. Laakiin ha u helin si qarsoodi ah oo tayo hoose leh, raqiis ah, duuban oo khafiif ah, oo ay ku sameeyeen shambaar: ma joogaan wakhti dheer waxayna noqon doonaan lacag qashin ah.
Kala sooc qashinka waraaqaha
Nooc noocee ah ee loogu talagalay jikada si loo doorto?
Marmits ayaa kululeeyaa shumac
U cadaydo carrabka
Sidee loo isticmaalaa sigaar elektaroonig ah?
Cauldron on qoryaha
Dhalooyinka dhasiga ah
Sidee loo isticmaalaa isku-xoqan?
Qalabka qolka leh ee Amplifier
Sidee loo doortaa mashiinka kibis?
Bura glycerine loogu talagalay dhalaanka cusub
Kalluun Neon - dhalmo
Isku-baddelida sariirta sariirta sariirta
Maxay tahay fitamiin E faa'iido leh?
Kubadda kolayga dumarka - sharciyo iyo wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ciyaarta
Maxaa caawiya Biseptolum?
Irina Sheik, Vanessa Parady, iyo xiddigaha kale ayaa ka soo qayb galay casho sharafkii Vogue Foundation
Sidee loo go'aamiyaa bikradnimada?
Brooklyn Beckham wuxuu soo booqday Chloe Moretz uu jecel yahay filimka "The Widow"
Park Park, Jarmalka
Sidee jacayl ula jishaa saaxiib?
Jasiiradda madow ee haweenka
Ciladda bisadaha - calaamadaha
Royal Kanin oo loogu talagalay walxaha waaweyn ee jilicsan
Cheesecakes leh manga foornada
Antioxidants - maxay tahay iyo maxay u baahan yihiin?
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Switzerland
Qaadista Lunar - Xaqiiqooyin xiiso leh iyo qiyaaso
Diyaargaroobida murqaha ilmaha ee loogu talagalay